China ụlọ ọrụ na -emepụta ihe na -emepụta ihe na -emepụta ihe na Otu Opps
MSW Shredding, RDF Shredding, Mmebi ahihia ụlọ ọrụ.
Akụkụ urughuru mgbe ọ gbasasịrị: 50-150mm
Mbanye: moto eletriki ma ọ bụ ịnya ụgbọ ala hydraulic.
E nwere ngwa ọrụ pụrụ iche ahaziri iji chọta isi oghere na ihe eji amị amị dị n'etiti okporo osisi ga -enwe ọbụna akụrụngwa. Yabụ na akụrụngwa a na -eri nri ga -akwakọba n'etiti ụlọ na -eme mkpọtụ ka ọ ghara ịdị mkpa onye na -ebugharị hydraulic na mma ọ bụla dị na isi isi ga -egbutu akụrụngwa ahụ na akpaghị aka. Oghere dị n'agbata ihuenyo na mma ga -edobe ya nke ọma ka ihe anụ ahụ ghara ịlaghachi azụ na iyi akwa isi ga -agbada ala, ikike ya ga -abawanye. A na -etinye ụdị modulu na -eyi efere n'ime ime ụlọ ga -agba mbọ hụ na agaghị ehichapụ ụlọ nke shredder.
Ụdị mma mma
A na -ahazi Knives dị ka ụdị ihe nkedo S ma ọ bụ ụdị nke V na rola. A na -ejikọ kịrịkị na mma na isi ya ka ọ nwee ike gbasaa ngwa ngwa. Enwere ike ijide n'aka oge itule ike nke isi isi na mgbada na mkpọtụ shredder ga -agbada, arụmọrụ ya ga -aka mma.
Ụdị M ụdị obi ike
A na -agbakwunyere ihe akaebe na -eyi ka ọ dị elu, oche nke mma nwere ike ibughari ma ọ bụ ụdị na ụdị welded. A na -eji ụdị mma a n'ọtụtụ ebe maka ihe nkiri PP, karama PET, akpa akpa, ite, MSW, ọkpọ plastik, akwa, teepu, wdg.
V ụdị mma mma mma.
A na -emegharị elu ala dị ka ụdị ihe nkedo. Ọrụ mgbochi eyi dị elu, oke nke mma dị nso, ikike ya buru ibu yana arụmọrụ ya dị elu. Plastik siri ike, akwụkwọ, osisi, akwa, ahịhịa na gbọmgbọm oghere, wdg.
Ihe nke mma nwere ike bụrụ alloy steel DC53 na HARDOX550 yi ihe dabere na agwa nke akụrụngwa. Mgbe ejiri shredder maka iyi ihe dị ka eriri, akwa, akwa iko, MSW, wdg, a na -eji HARDOX.
Ihe nchekwa maka ịma jijiji
Mgbe ị na -emebi ihe siri ike, ujo nke ihe nrịgo ahụ ga -adị elu dị ka ọrụ siri ike, iji zere ịkpọtụrụ mma na echebe isi ihe nrịgo site na oke nrụgide, yabụ ihe dị nro dị ka ihe nchekwa dị mkpa, yana ọkwa ịma jijiji. etinyere oghere, mgbe ịma jijiji dị oke njọ, ngbanwe akpaka nke shredder ga -eme ma ọ bụ kwụsị shredder na akpaghị aka.
A na -etinye mmanụ hydraulic n'ime njikọta dị ka onye na -ebugharị oge. Yabụ ngbanwe nke ọrụ nke shredder ga -adị nro na enweghị ntụpọ n'agbanyeghị oke ma ọ bụ ọsọ ntụgharị. Mgbe ndị na -eme ihe ike buru ibu, a na -agbada ọsọ ka ọ na -abawanye torque ka ọrụ nke shredder ga -adị mma. A na -ejikọ turbo na wiil nke mgbapụta ya na njikọ dị nro ka agbatịkwuo oge ọrụ.
NILE SSD1000 SSD1500 SSD2000
N'ozuzu akụkụ (L × W × H) 3950 × 2580 × 4115mm 4500 × 3000 × 4115mm 5025 × 3020 × 4500mm
Ịrị elu 3300mm ogologo 3300mm ogologo 3300mm ogologo
Ụlọ na -egbuchapu ihe 1730 × 1020mm 2230 × 1550mm 2750 × 2050mm
Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ 17.5 ～ 18.2 T 21 ～ 22.5 T 35.7 ～ 36.5 T
ụdị mbanye Eletriki/Hydraulic Eletriki/Hydraulic Eletriki/Hydraulic
mmepụta nke moto 2 × 55 /2 × 75Kw 2 × 90 /2 × 110Kw 2 × 132 /2 × 160Kw
Onye ncha qty 2 2 2
ọsọ nke isi aro 160-200/ 160-250 160-200/ 160-250 160-200/ 160-250
qty nke mma 90 220 325
nhapụta nha Ogologo 6-100 mm Ogologo 6-100 mm Ogologo 6-100 mm
Ikike 6-7 T/H 13-15T/H 22-25T/H
Okirikiri Rotary Cutter (mm) Φ284 Φ430 Φ514 Φ660 Φ800
Aro Speed ​​(rpm) 14 15 11 23 7.5
Onye na -egbu osisi Qty (PC) 40 30 32 22 48
Ọkpụrụkpụ cutter (mm) 20 40 50 80 50
Ụgbọ ala (KW) 7.5+7.5 22+22 45+45 55+55 90+90
Previous: Single aro Shredder
Next: Ogwe osisi anọ (RDF Shredder)
Plastic Granulator , Tree Shredder , Msw mmako , ala Mill , Rdf Mmanụ , Granulator ,